Chapelle(Asa) | FPMA Orléans
Fametrahana ny Jiro eo ambaravarana fidirana. (L; M)
Fividianan hazo Noely (artificiel)vaovao ary Fametrahana sy fampihaingoana azy. (Vola Liva Neriah).
Fametrahana ny Moquettes sy Tapis tao ampiangonana (H;L;M;Tiana)
Volana Aogositra-Septambra 2014
Novitaina daholo ihany ny asa niandry (efa ho herintaona) rehetra tao ampiangonana(L sy M):
-Loko sy varavaran'ny Boitier EDF (L)
-Cache Fils sy ny rindrina niandry teo amin'ny varavarana.(L)
-Conduits fils isaky ny lafin'ny rindrina. (H; L)
-Fametrahana ireo double prise isaky ny rindrina(Hary).
-Ho fanomanana ny Fetimpiangonana dia nividy ireo Tweeters @ Peavey ny mpiandraikitra fa maty ny teo.(L sy H)
Volana Desambra 2013
Tokony ho vita eto ary tokony ho fonctionnelle ny trano fa fikojakojana sisa.
Ni-saute daholo anefa ny courant nandritry ny Culte du 01 Desambra.
Ny miandry (an'i J)
Cache fils etsy ambony varavarana
Conduits fils sasany Gde Salle.
Filaminan'ny fils Sono
Loko tolàna T. ivelany (Orel)
Joints carrelages T.(M)
Evier sy ny Branchements Eau (L)
Installation ny Chauffages (4+2) gde Salle.(L)
Chauffage sacristie (J)
Isolation porte sacristie (L)
Isolation tuyauterie conduit d'eau (Solofo)
Famantaranandro ambony (Mahefa)
Fitaratra T. (L)
Fandaminana ny seza (L;M;N;V)
Fanandramana ny chauffages soufflants avy ato ambany: tsy ampy. (L)
Volana Oktobra sy Novambra
Cache fils etsy ambony varavarana.
Plinthe eo @ rindrina
Volana Septambra Oktobra
Electricité sy Chauffage tokony ho brancher-na (tonga ity ny atsiaka)
Varavarana ho lokoina ao @ sacristie (ivelany sy anatiny)
Branchement Electricité sacristie sy Tranobe
Branchement Rano Sacristie
Finitions rindrina sy Plafond
Loko ao @ Toilette
Ny Vita :
Varavarakely sacristie (Vicky sy L)
Carrelages sy Meubles Cuisine(Vola sy L)
Plomberie(Metro sy Vola)
Toilettes(Liva sy Metro)
Rindrina sy Plafond Sacristie( Antsa; Hary(H); Vola(V); Solofo(S1) Mahefa(M)
Plafond Toilettes (Liva)
Mandoko ny varavarana ivelany sy anatiny (mainty sy marron)
Manamboatra ny varavarana fidirana anatiny.
Electricité: Chauffages- Prises-Fividianana sy fametahana.
Plomberie: raccordements intérieur
Toilettes: raccordements Eaux usées
Sacristie: Lambris en attente de l' Electricité.
Zoma 23: Fanoloana (fanalàna sy fametahana) ny varavarakely ao @ sacristie izay vaky fitaratra roa (2 olona V;L))
Alakamisy 22: Fametrahana ny Ecran be(3 olona:M;L;Eug)).
Alarobia 21 : Fametahana ny pates de bois eo amin'ny varavarana(olona roa).
Fandaminana sy fanadiovana ny Trano etsy @ toerana iasàna (3 olona).
Misaotra hatrany ireo tonga manampy ka mahafoy ny fotoanany sy misasatra mandany ny takarivany na ny asabotsiny aorian'ny asa fitadiavany, izay ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery hatrany.
Asa miandry tsy vita ary ny tokony hatao: (ara-pahamehana na azo atao miaraka )
*Faobe, sy maika
Fanadiovana ny cabine WC (tsy vita madio)
Fametrahana ny WC Chimique (atao provisoire).(Vita 26 Mey)
Adduction d'eau: fandavahana ny hametrahana regard 80x80x80cm.(lasa ny 27 Mey ny commande: alakamisy 06 Jona ny Travaux))
Assainissement : miandry entreprise (Vita 27 Mey)
Fanaovana ny traitement ny rindrina tsy hiofo sy hamovoka.(Vita 23 Mey)
Mividy contreplaqués hanaovana ny varavarana fidirana afovoany (22Mey)
Mametraka ny contreplaqués eo amin'ny varavarana. (Vita 22 Mey)
Fametrahana ny haingombaravarana (andàlana)
*Sacristie:Mandoko ny varavarana anankiroa etsy amin'ny sacristie.
Manatsara ny varavarana ivelany ao amin'ny sacristie: manolo an'ilay hazo efa somary boboka ary mandoko ny ivelany sy ny anatiny.
Manolo ny fitaratra na ny varavarakely mihitsy mba hahatsara ny isolation sy mikarakara ny fividianana azy ireo.
Mamita ny installation ao @ sacristie mba hi-assainir ny toerana.
Mamita ny installation Electrique
Fametrahana ny Kitchenette
Kojakoja samihafa:Dia momban'ny chauffage koa: préparation (achat)sy installation.
Fametrahana ny écran (Kely) ho an'ny vidéoprojection (Vita 21 Mey)
Fametrahana ny supports ho an'ny Baffles.(Vita 21 Mey)
Nez de marche: fividianana sy fametahana azy(Vita 31 Mey).
Fandokona ny nez de marche(vita 01 Jona)
Fandokoana ny estrade1 sy 2 (Vita 15 Mey)
Corniche na Moulure varavarana, vidiana sy apetaka (vita 01 Jona)ary lokoina.
Ny trano fidiovana anatiny (rindrina 17-24 Jona)
Manitsy ny varavarana.
Asabotsy 25 Jona : Fividianana ireo entana hanaovana ny toilettes
Alatsinainy 24 Jona : Loko sy carrelage tsy mbola natomboka. Ny Electricité efa mandroso tsikelikely ary ny Lambris ao @ sacristie dia mandroso ihany koa ny tafony.
Alatsinainy 17 Jona: Nanaovana ny trano fidiovana ka miandry izay mba afaka hanisy ny carrelages.
Alatsinainy 03 Jona: Fitsidihana nataon'i Joël (solon'i Jeffrey)momban'ny rindrina @ Toilettes.
Fandoavana ny ny 1/3 Sà José.
Asabotsy 1ny Jona: Fametrahana ireo quarts de rond eo @ zoron'ny varavarana anatiny. Efa azo lokoina izany izy rehetra rehefa vita ny pâte de bois hanitsiana azy. Fametrahana ny coudes support baffles etsy @ rindrina.
Zoma 31 Mey: Nanangana ny Dabilio 3x2 places.Nametaka ny nez de marche (hazo) sy nandoko azy.
Alatsinainy 27 Mey: Fotoana [email protected] Sà JOSE momban'ny regard ka heveriny hatao ny Zoma na Alatsinainy. Vitan'i Colas ny conduits à l'égout. Mbola tsy maintsy mitady corniche na moulure hatao @ varavarana.
Alahady 26 Mey: Fametrahana ny WC Chimiques en place. Alahadin'ny AMF io.
Zoma 24 Mey: Fametrahana ny supports Baffles. Fampirimana ny entana natao tetsy ambony.
Alakamisy 23 Mey: Nametraka ny contreplaqués.Fanosorana lakaoly ny rindrina mba tsy hiofo.(Noeline-Perle-Rado). Tonga ny Colas nametraka ny lavaka hanaovana évacuation.
Alarobia 22 Mey: Voapetraka ny écran(kely) pour vidéoprojecteur. Fividianana ny Contreplaués hatao etsy ambaravarana.Voahomana ny WC Chimique
Alarobia 15 Mey :nandokoana ny tany eo amin'ny estrade, teo ihany koa no nanaovana ny la croix sns. Andrana amin'ny Colle papier peint [email protected] rindrina.
Alatsinainy 13 Mey: Lasan'ilay nividy azy ny meuble be tao ampiangonana. Ary natao talohan'izay ilay lambris antokonan'ny estrade.
Ny herinandro manaraka 06-12 Mey io indray kosa no tokony hanaovana ny WC eo @ Confessionnal taloha. Hanaovana ihany koa ny varavarana fidirana.
Ny fampidirana ny rano dia mbola miandry ny devis ihany koa.
Ny fanarian-drano moa no tsy mbola azo akory ny RV @ ilay entreprise.
Nohon'ny tsy fivoahan'ny Entreprises maromaro tamin'ito herinandro ito dia ny momba ny varavarana aloha no natao, ary izay ihany koa no nanaovana ny ambany tohatra ho fametrahan'entana. Asa madinika daholo ireo fa mandany andro ny fanaovana azy. Toraka izany koa ny fanaovana ny estrades.
Ny momban'ny "sono" ao ampiangonana ihany koa no nojerena tamin'izany. Ny fanantanterahana sy ny projection sisa no jerena no hatao.
Alahady 05 Mey no hatao ao ny fanompoampivavahana voalohany (Fikasàna). Mandoto akanjo ny rindrina fa hitadiavana hevitra ny tsy ampiofo azy..
Asabotsy 04 Mey no hanohizana ny fitaovana @ jiro sy ny 2è couche amin'ny tany.
Alarobia 01 Mey teo kosa fotoana hanadiovana ny rindrina tapany ambany. Io andro io ihany koa no hanaovana ny tany(carrelage) en javel et en huile de lin.
Volana Aprily Zoma 25 Aprily @ 15h: Hisy olona aorian'ny 15h hanohy:
-rindrina -varavarana -tany -hafa koa -
vitan'ireo tonga tao (tsy tononina ny nanao ny Autel sy ny lokon'ny varavarambe (E) ary ny nandady nanadio ny tany(F)).
Tsara hatao tanamaro ny rindrina dia maka 5m² avy(ohatra sur 100m²).Mbola misy dingana (2 na 3) no heverina
Electricité no maika na vita indray andro aza.
Alakamisy 24 Aprily @ 14h30 dia hisy olona hiasa ao @ Chapelle St Marc. Isaky ny tolokandro kosa dia hisy olona foana ao.
20 Aprily: Vita soa amantsara ny porte ouverte natao tao @ Chapelle, nisy olona sahabo ho 50 teo no tao niaraka [email protected] ireo mpanakanto eto antoerana.
19 Aprily: Aza adino ny Portes ouvertes anasana anao @ 20 Aprily aorian'ny @ 5o.h. mba hahitanao ny toerana ka hanoloranao ny famporisihana rehetra na arabola na arabatana na aratsaina.
18 Aprily -20 Aprily :Isaky ny tolakandro @ 3 1/2 o.h dia misy olona ao amin'ny Chapelle
17 Aprily: Voadion'ny SVK ny rindrina (dingana1)ary voalahatra ny dabilio amin'ny ilany. Efa voaala avokoa ny rideaux.
13 Aprily: Voatambatra sy mijoro daholo ny Dabilio 21 ao @ Chapelle.
08 Aprily 2013:Efa tonga ao izao ny Dabilio 5_places sy 7_Places ka 9 ihany no voatsangana (montés)
7_Places efatra no hatsangana ary ny sisa hatao 5_places daholo.
22 ny totaliny rehefa vita daholo.
01 Aprily 2013: Chapelle Barrière Saint Marc-Eglise FPMA_Orléans
Tonga ity ny volana Aprily izay hanombohan’ny convention-tsika sy ny Diocèse.
Tsara izany raha alaina aingana dia aingana ny trano mba tsy hanofàna ny trano anankiroa. Ka noho izany dia kasaina ny hamitàna azy ity mba hahazoana miditra ao alohan’ny Pentekosta. Ka raha ny faniriana aza dia ny handeha ao ny 30 Aprily (2013 io).
Izany anefa tsy vitan’olombitsy fa tsara raha hiarahana fa firaisana no hery ary fitoriana ihany koa ny asa toa itony ka izany no hanaovana ANTSO AVO ny Kristiana Malagasy rehetra eto ORLÉANS fa mbola be tokoa ny miandry ary ngeza koa raha jerena akaiky ny hatao rehetra.
Toy izao ary ny andinindiny amin’ny ao